Korea: Fihaonana voalohany, ahoana no ahalalanao ny ho sakaizanao anatin’ny 10 minitra. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2009 5:01 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, srpski, English
Amin’ny fomba ahoana no mety ahitanao ilay lehilahy sahaza anao haingana indrindra? Tsinjoko fa mizara famakafakana ara-pomba-piaina (psychologique) mahavariana ireo mpamaham-bolongana izay milaza manao hoe amin’ny fomba ahoana no ahafahanao mamaky ny toetran’ny maha izy azy ny olona sy ny endriky ny toetra ananan’ny lehilahy miaraka aminao, na amin’ny fomba ahoana no ahitanao ny lehilahy izay mendrika ny toetra ananao.
Raha te ahafantatra hoe karazan’olona iza ity miaraka aminao dia tsy mila mandany fotoana miaraka aminy amam-bolana akory ianao. Anatin’ny 10 minitra fotsiny ihany no ahafantaranao ny maha izy azy.
Inona ny fanatanjahantena tianao indrindra?
– Ny lehilahy tia miazakazaka sy milomano, fanatanjahantena vitaina samirery, dia olona mahaleotena ary mifaly amin’ny fotoanan’izy samirery ihany.
– Ny lehilahy tia fanatanjahantena misy ekipa, toy ny baolina kitra, ny basketball, dia olona tia mifaninana ary tia mifandray aman’olona.
– Ny lehilahy izay zara fa milalao fanatanjahantena dia fantatra mazava ho azy fa olona mahaleotena, mora voadoana, ary olona mahay miheritreritra lalina.
Hafiriana ny faharetan’ny finamanana ?
– Miaraka amina namana efa fantany nandritra ny 10 taona izy : Lalina sady mihaja ny fiarahana aminy. Kanefa, mety tsy tia fihovana izy. Ho ela vao azony aminao ny fahatokisana.
– Mora aminy ny mifandray amin’ny vahiny: mora aminy ny mizatra tena miaina anaty toeram-baovao.
Inona ny fahazaran-dratsy ananany?
– Tia miloka izy: mieritreritra ny hisedra loza izy. Eny fa na dia mihevitra ary izy hoe hamalifaly ny olona manodidina azy ihany amin’izany, ary mety efa diso manantena be loatra anefa, dia avy eo tsy afaka hisedra ny fahamarinana intsony.
– Mpifoka sigara matetika: mety ho mora misendoatra sy mora sorena izy
– Mpisotro matetika: mety manana teotra manokana izy ary sarotra hidirana.
Ahoana ny endriky ny fomba firesany?
– Raha tokony hiantso izy, dia naleony nandefa mailaka anterineto: mety ho karazan’olona tsy mba manokatra ny sainy amin’ny fomba tsotra izy. Afaka manafina ny tena fahatsapana avy ao anatiny ny mailaka izy satria afaka ovaovany matetika ny fomba fiheritreriny.
– Ampiasainy ny fifandraisana internet messengers: mitady ny fisintonana tsy misy fifandirana izy. Raha tsy misy izany, dia tsy ho tafatombona mihintsy izy.
– Miantso matetika izy: tsy matahorany ny manakaiky vehivavy . Lehilahy mavitrika izy.
Inona ny akanjo tiany mba hanaovanao?
– Akanjo tsotra/mahazatra no tiany: Hainy ny manaiky ny zava-misy ary izy tenany aza dia lehilahy tsy mba manana fahasahirana amin’ny endrikendri-javatra.
– Ankafihiziny ny akanjo lafo vidy: manana ny lanjany manokana izy ary tia vola sy harena. Eny fa na dia ananany aza ny vola ankehitriny, dia mety asiany lanjany be loatra ihany izany vola izany.
– Tiany ny akanjo manaitaitra: be rehareha izy. Tiany ny fitsiriritana ataon’ny hafa.
Ahoana ny fomba fitondrany fiara?
– Manara-body akaiky ny fiara eo anoloany matetika izy ary mitady hifindrafindra lalatsara foana: Sahirana izy manandanjalanja ny fihetsem-pony.
– Misaofera amim-pilaminana sy moramora izy na dia hoe sarotra aza ny fafamoivoizana: Malefaka toy izay foana izy ary mpandanjalanja tsara ny fihetsem-po.
Inona ny fandaharana ao amin’ny Televiziona tiany?
– Tiany ny mijery fandraharana mampiomehy sy mampiala sasatra: Angamba izy lehilahy miezaka miala amin’ny olany sy ny hatezerany. Kanefa, mety ho olona sarotra iresahana mikasika hevi-dehibe. Rehefa miresaka zava-dehibe ianao, dia mety mivoana matetika ny resany ary mety ho sorena ianao miresaka aminy.
– Tiany ny fandaharana toy CSI: Mahay manadihady sy miheritreritra izy. Rehefa misedra olana izy,dia ananany ny fahaizana hamaha izany.
Fahafiry izy eo amin’ny mpiray tampo aminy (eo amin’ny zaza nateraka)?
– Voalohany: manana ny fihevitra mandray andraikitra sy mandray ravin-dena izy.
– Farany: Tia mamoron-javatra ary tia fiainana vaovao.
– Eo afovoany: tadiaviny ny fanohanana ary mora voadona izy.
Ahoana ny fikarakaran’ny vatany ety ivelany?
– Mijery fitaratra matetika izy ary manamboatra sy mikarakara ny volony : Lehibe ny faniriny mba ho tafita.
– Tsy miraharaha ny endriky ny vatana ety ivelany izy: olona tsy mitsara ivelany izy. Ny ao anaty no jereny fa tsy ny aty ivelany.
Ny fomba fijeriny?
– Tsy mijery imaso imaso izy rehefa miresaka: menatra izy na tsy azo atokisana.
– Mijery anao mivantana avy hatrany izy: Miezaka mafy ny hanantona anao izy
– Vitanao ny mamaky ny fihetsem-pony ao anatin’ny masony: Feno fitiavana vehivavy tanteraka izy.
– Be resaka: feno hery izy ary mpankafy. Kanefa mety ho tia tena loatra.
– Tsy dia miteny firy ary miresaka miadana: mitandrina sy milamina ihany izy.